काखे बालक छोडेर हराएकी रुपा ८ दिनमा भेटिइन्, घर छोडेर कहाँ बसेकी थिइन्, खोलिन् सबै कुरा (भिडियो हेर्नुस्) – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Video/काखे बालक छोडेर हराएकी रुपा ८ दिनमा भेटिइन्, घर छोडेर कहाँ बसेकी थिइन्, खोलिन् सबै कुरा (भिडियो हेर्नुस्)
उनी हराएको भनेर भिडियोमा सार्वजनिक भएपछि उनीहरुले प्रहरीमा पनि सम्पर्कमा राखेका थिए । फोन गर्दा तिम्रो छोरी कहाँ गएको हो, त्यसको प्रमाण सहित आउनुपर्छ भनेर श्रीमानले भनेको रुपाले बताइन् । प्रहरीले बोलाउँदा पनि नआएको रुपाको आमाले बताएकी छन् । उनले ज्याईलाई बोलाउँदा म तिमीहरुले आउ भन्दा आउने जा भनेपछि जाने हो र ? भन्दै जवाफ लगाएको रुपाको आमाले बताइन् ।
कसैलाई फोन गर्न परे मेरो मोवाइलवाट गर भनेर श्रीमतीको मोवाइलको सिम निकालेर फालिदिए । दागंको घोराही उपमहानगरपालिका १९ नम्बर वडावाट रोल्पा विवाह गरेर गएकी रुपा घर्ती सानो काखे बालक छोडेर हिडेकी हुन् । तर रुपाले भने आफुलाई श्रीमानले अनावश्यक शंका गर्ने गरेको बताएकी छन् । मेरा आफन्त छन्, दाजुभाई र साथी पनि छन् । कसैसंग कुरा नै गर्न नहुने हो र ? आफ्नै फुपुको छोरासंग कुरा गर्दा पनि शंका गरेर झगडा गर्छन,उनले भनिन् ।
जे लमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भेट्न यति टाढा बाट आए मान्छेहरू हेर्नुस्,भिडियो